सुशान्तको ह’त्या भएको आशंका, काकाले गरे खुलासा ( भिडियो सहित ) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/सुशान्तको ह’त्या भएको आशंका, काकाले गरे खुलासा ( भिडियो सहित )
एजेन्सी : बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ’त्मह’त्या गरेकाे खबरले सिंगाे कला क्षेत्र शाेकमा डुबेकाे छ । यता राजपुतका काकाले सुशान्तले आ त्माह त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । भारतीय संचारमाध्यम इन्डिया टिभीका अनुशार उनले यो खबर झुट रहेको बताएका हुन् ।
“सुशान्त सु साइडको बिरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो, उस्ले यस्तो काम गर्न नै सक्दैन पुलिसले यो केशलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर छानबिन गरोस ।” यो खबर सुनेपछि उनको बुवा बेहोस अवस्थामा छन् भने ४ जना दिदीहरुले उनको लासलाई हेरेर रुदै बसेका छन् । काकाकाे कुराले याे घटनालाइ अझै रहस्मय रहेकाे देखाएकाे छ ।आ’त्मह’त्या गर्नु हुन्न भन्ने संदेश दिने चलचित्रमा अभिनय गरेका राजपुतले स्वयमले आ’त्माह’त्या गर्न नसक्ने उनकाे दावी छ ।
सुशान्तकाे फ्लाइटमा प्रहरीले कुनै नोट नभेटेको बताएको छ । उनका साथीहरुले ढोका ढ्कढ्काउँदा नखोलेपछि ढोका फु’टाएर हेरेको बताइएको छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले पोष्ट गरेका स्टाटस र सामग्रीले उनी कुनै मा नसिक त’नावमा थिए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
उनी एक्लोपनको सि’कार पनि भएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै भावुक स्टाटस लेखेको देख्न सकिन्छ । उनले आफ्नो जिवनको अन्तिम पलमा लेखेको एउटा कविताले उनमा निरासा थियो भन्न सकिन्छ । उनले यस्तो लेखेका थिए । धमिलो भएको विगत आँ’सुको थोपा बन्दै उडिरहेछ, असीम सपनाहरु छन् जसले मुस्कानलाई आकार दिइरहेका छन्, यो क्षणभरको जीवनले आँ’शु र मुस्कानबीच मोलतोल गरिरहेछ ।
यो नै अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम कविता थियो । कवितावाट उनको मनमा केही कुरा चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उनी जिवनको दुईवाटोमा थिए । मुस्कान रोज्ने की आँ’शु ? गत बुधवार इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको उनको यो भावनामा धेरै कमेन्ट आएका छन् । उनले आफ्नी आमाको तस्बिर पोष्ट गर्दै कविताका यि दुई लाइन कोरेका थिए ।
जसमा आमा र आफ्ना तस्बिर थिए । उनले ति तस्बिर पनि श्यामश्वेतमा राखेका थिए । ह्या’सट्या’गमा लेखेका छन् ‘माँ’ लेख्दै सार्वजनिक गरेका यि कविता र उनले राखेका तस्बिरले उनी आमाको यादमा थिए भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सुशान्तकी आमाको सन् २००२ मा निधन भएको हो। उनले १६ वर्षको उमेरमा नै आमा गुमाएका थिए । आफ्नो प्रेम जिवनमा पनि असफ भएका उनी ए’क्लोपन महशुष गर्दै थिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनले लगातार आफ्नाी आमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै स्टाटस लेखिरहेका थिए ।
यस अघि पनि उनले यस्तै भाव’नात्मक कविता लेखेर आमालाई सम्झिएका थिए । ‘तिमी छँदा म पनि थिएँ, अब त म स्वयं पनि सम्झनामा मात्र छु, छायाँजस्तै‘ उनको यो कवितामा निकै ग’हिरो अर्थ लुकेको छ । अहिले उनी छाँया बनिसकेका छन् ।
सुशान्तसिंह रातपुतले सन् २००८ मा ‘किस देश मे हैं मेरा दिल’ टेलिभिजन कार्यक्रमबाट अभिनय कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए। यस कार्यक्रमबाट भने उसलाई खासै पहिचान भएन। त्योसँगै टेलिभिजन कार्यक्रमहरु ‘जरा नचके देखा ले’ र ‘झलक दिखला जा’ मा पनि देखिएका थिए सन् २००९ मा उनी पवित्रा रिश्ता टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिएका थिए। यस कार्यक्रममा अंकिता लोखंडेका साथमा उनको जोडी चर्चित रह्यो। यस कार्यक्रममा मानवको भुमिकामा उनलाई धेरैले चिने।
‘कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को विजेता’ बनेपछि भरतमणीले के भने ? (भिडियो हेर्नुस्)
लक्ष्मणको प्रेमिका प्रहरी चौ$कीमा ! पुष्पाले यसरि बनायो लक्ष्मणलाई मा$र्ने प्लान, आँखै अगाडी ह$त्या (हेर्नुहोस भिडियो